Al-arba’ouna An-nawawiyyah - ⁠⁠⁠Malagasy
DOCX 17.6 MB 2019-05-02
"Ô ianareo ry Iraka! Mihinàna amin'ireo zavatra tsara ianareo ary manaova asa soa" [23:51].
"Ô ianareo izay nino! Mihinàna ianareo amin'ireo zavatra tsara nomenay anareo"[2:172].
Niteny Mikdaam ibn Ma'diikarib t hoe: Naheno an'ilay Irak'i Allah ﷺ‬ aho nilaza hoe:"Tsy misy zavatra fenoin'olombelona ratsy mihoatra ny kibo. Ampy ny olombelona sakafo vitsivitsy afaka mampitraka ny hazon-damosiny. Saingy raha tsy vitany mihitsy, dia aoka àry ny ampahatelony ho an'ny sakafony, ampahatelony ho an'ny fisotrony, ary ny ampahatelony ho an'ny rivotra iainany".
Niteny 'Abdollah ibn 'Amr t, fa i Mpaminany ﷺ‬ dia nilaza hoe:"Misy toetra efatra, izay olona misy azy ireo dia mpihatsaravelatsihy, ary raha ampahany amin'izany no misy aminy dia misy toetry ny mpihatsaravelatsihy izy mandra-pamelany izany toetra izany: olona izay mandainga rehefa miresaka, tsy manatanteraka ny teniny rehefa mampanantena zavatra, miala làlana (tsy milaza ny marina fa mitaky izay tsy azy na mandà ny zon'ny hafa aminy) rehefa misy disadisa, ary mivadika rehefa manao fifanekena".
"Miarina miala ny fandriana izy ireo, mivavaka amin'ny Tompony, amim-pahatahorana sy fanantenana; ary izy ireo dia manome (ny hafa) amin'ireo anjara nomenay azy ireo ! Tsy misy ny mahafantatra ireo fahafinaretan'ny maso izay nomanina ho azy ireo, ho valisoa amin'izay nataon'izy ireo"[32:16-17].
Inona ny atao hoe shahadatainy
NY ENDRIKIN'NY OUZOU
Ny Andry voalohany dia,finoana an'ny Allah